Archive du 20201002
Kere sy fahantrana Misy Malagasy mihinana tanifotsy …
Ireny tanifotsy ireny sisa no atao sakafo any Bekiria, 11 km miala ny tanànan' Ifotaka Faritra Anôsy, raha ny vaovao sy ny sary avy any an-toerana.
Chandoutis Raoera “Hatahorana hampisy ady ny toe-draharaha”
Misafotofoto kely ihany ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny, hoy ny filohan’ny fikambanana Zon’olombelona mampandroso vahoaka, Chandoutis Raoera. Ny atahorana amin’io dia ny ampisy ady.
Dr Joseph Randriamiarisoa « Mianjera no hiafaran’ny fanjakana ratsy fototra »
Kitoatoa ny fifidianana nanamboka ny taona 90 hatramin’izao, ka mamotika ny demokrasia eto amintsika. Misy ny fampanarahan-dalàna ny tsy araka ny voalazan’ny lalàna, raha ny fanehoan-kevitr’i Dr Joseph Randriamiarisoa Minisitra teo aloha, Mpikamban’ny Antoko UNDD.
Fitorian’ny Loholona Azo raisina fa tsy mitombina, hoy ny HCC
Notsipahin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny fitoriana nataon’ireo solontenan’ny loholona miisa 9 naneho fa misy ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny fanatanterahana ny fifidianana loholona.
Grand sud est Toamasina Nanazava ny resabe etsy sy eroa ireo Raiamandreny
Miteraka resabe tao Toamasina ny momba ny fikambanana Grand sud ivondronan’ireo zanaky ny faritra atsimo atsinanana .
Hentitra ny Prefen’Antananarivo « Tsy mahazo mamory vahoaka ny TAMAMI »
Mailo sy manao izay ho afany amin’ny fisakanana ny hetsika politika ny mpitondra, ka miharihary amin’izao fa io no isan’ny hanohizana hatrany hamehana ara-pahasalamana. Ahiana amin’ny fanohintohinana ny filaminam-bahoaka ny hetsika,
Corridor Ankeniheny Zahamena Hamafisina ny fiarovana azy
Amporisihana ny fifanomezan-tanana eo amin'ny olom-pirenena tsirairay mba hahafaha miara-misoroka sy manafoana ny fanimbana ireo harena voajanahary. Paikady apetraka amin'izany ny fampandraisana andraikitra bebe kokoa ireo Vondron'Olona Ifotony (VOI)
Resaka fifidianana atao amboletra Ho raisin’ny HCDDED anio ny KMSI
Taorian’ny fangatahana nataon’izy ireo teo anivon’ny filankevitra ambony ho an’ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tan-dalana na HCDDED etsy Soanierana
Fanaovana politika Mila manome ohatra tsara ny mpitondra
“Aoka ny mpitondra hanome ohatra tsara eo amin'ny fitantanana, fiaina, fijery, fiteny eo amin'ny fiarahamonina (exemplarité)” hoy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny famelabelarany ny “Fisandratana 2030” ny taona 2018.
Ambanivohitr’Ambatondrazaka Zaza roa matin’ny Kubota nivadika
Nitrangana loza namoizana aina tany amin’ny Fokontany Andrangorina, kaominina ambanivohitra Ambohidava aratra, distrikan’Ambatondrazaka afak’omaly alarobia 30 septambra.
Anjozorobe Naolana ilay vehivavy dia nalaina an-keriny ny zanany
Mitombo hatrany ireo trangana habibiana eto amintsika. Renim-pianakaviana iray 21 taona no naolana lehilahy tsy fantatra ny 29 septambra lasa teo tany amin’ny Fokontany sy kaominina Marovazaha, distrikan’Anjozorobe.
Madagasikara sy Indonezia Hanamafy ny fiaraha-miasa amina sehatra maro
Omaly alarobia 01 oktobra 2020 Atoa Benny Yan Pieter Siahaan no nanolotra ny taratasy fankatoavana azy ho mpiraki-draharaha solontenan’ny Masoivoho Indonezianina hiasa sy honina eto amintsika tamin’ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Malagasy Atoa Tehindrazanarivelo Djacoba A.S Oliva.
Savorovorom-baolina Tsy hihaona indray i Madagasikara sy Ghana
Namoaka fampitam-baovao ofisialy ny federasionin’ny baolina kitra Ganeanina, fa hisy ny lalao ara-pirahalahiana hifanandrinan’ny Black Star ekipam-pirenen’izy ireo amin’i Qatar izay handray ny fiadiana ny tompondaka eran-tany ny 12 oktobra ho avy izao.
Gisalahy homan-ketsa ?
Nangataka fanafoanana trosa amin’ny banky iraisam-pirenena ny Filoha Rajoelina ny talata lasa teo.
Lalana manodidina an`Antananarivo Misy dezaka mihoatra ny any ambanivohitra
Tsy hasian-teny intsony ny haratsian` ny lalana ao Antananrivo Renivohitra. Lavaka no mameno ireo lalana.
Fanabeazana ara-pananahana Hiara-kiasa amin’ny « Sexologue » ry Jean Nirina
Manana olana amin’ny firaisana ara-nofo avokoa ny 85 %-n’ny tokantrano Malagasy amin’izao.
Nosy-Be Tonga ny mpizahatany an-jatony
Nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidin’i Fascène Nosy Be omaly tamin'ny 2ora 30 ny fiaramanidin'ny kaompania Ethiopian Airlines izay nitondra mpizahantany hatrany amin’ny 156 avy any Addis Abeba.
Désiré Ranaivoson « Mamongotra harena sy kolontsaina ny mpanjanaka ankehitriny»
Mihazakazaka ny toe-draharaham-pirenena ary naneho ny heviny manoloana izany ny filohan’ny antoko politika Marina, Désiré Ranaivoson. Nindraminy ny fehezanteny voasoratra tao anatin’ny boky malaza nosoratan’I ED Andriamalala, “Ny Fanagasiana”.
Tetikasa Grand Tana Azo ampiharina tsara
Efa mihamaro ny mponina eto Iarivo ankehitriny hany ka tsy maharaka noho ny fahamaroan`ny mponina eto Antananarivo Renivohitra ny fotodrafitr`asa hafahana mandray azy ireo eto amintsika. .
Minisiteran` ny fanabeazam-pirenena Voatendry ireo ekipa vaovao
Araky ny tatitry ny Filan-kevitry ny Minisitra farany teo dia nofoanana avokoa ny didim-panjakana nanendry ireo tale foibe rehetra tao amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy Fanofanana arak'asa teo aloha.
Tarika Lola Hiverina hiaka-tsehatra anio hariva
Na dia mbola tsy fantatra aza hatreto ny fotoana tena hanatanterahana ny fankalazana ny faha 20 taona niakaran’i Lola an-tsehatra izay nosomparan’ny
Toamasina Mian-dahy miam-bavy ny halatra Tuc Tuc
Vehivavy ny iray amin’ireo mpangalatra tuc tuc saron’ny polisy miasa ao Toamasina renivohitra. Tao Mangarivotra Atsimo no tratra izy ireo ny 29 septambra lasa teo.Vehivavy ny iray amin’ireo mpangalatra tuc tuc saron’ny polisy miasa ao Toamasina renivohitra. Tao Mangarivotra Atsimo no tratra izy ireo ny 29 septambra lasa teo.
Fitanana basy sy fikasana hanafika Lehilahy iray no tratra tany Maroantsetra
Lehilahy iray no tratra noho ny fitazonana basy vita gasy tsy nahazoana alalana tany amin’ny distrikan’i Maroantsetra ny 29 septambra lasa teo.
Fanoherana ny herisetra Nanao diabe ireo mpitondra moto ao Maintirano
Mpitondra moto iray no namoy ny ainy, dimy hafa naratra mafy vokatry ny fanakanan-dalana nataon'ny dahalo tany amin’ny kaominina ambanivohitra Analakinapa Disitrikan’i Maintirano afak’omaly alarobia.
Rongony hamatsiana an’i Mahajanga 72 kg no tratra tao Ambanja
Olona roa no tratran’ny CSP Ambanja nikasa hanondrana zava-mahadomelina ho any Mahajanga, andro vitsy lasa izay. Nandray ny andraikiny avy hatrany izy tamin’ny fanaraha-maso ireo olona 2 ireo.
Fahantrana sy kere any Atsimo Rehefa misy maty mitsitra vao tsaroana
Nampivarahontsana ny nahita sy nandre ny voka-dratsin’ny hanohanana any amin’ny ilany Atsimon’i Madagasikara, izay zary niteraka resabe tato anatin’ny herinandro.
Tontolon` ny asa Niseho masoandro ny fanambakana ny mpiasa
Mpiasa iray amin` ny 10 no tsara toerana mifanaraka amin` ireo lalàna momba ny asa eto Madagasikara.
Coronavirus 2 no maty, ambony ny taham-pahavoazana
Niampy roa indray ny matin’ny valanaretina coronavirus, ka ny iray tany Alaotra Mangoro, ary iray hafa tany Fianarantsoa, araka ny tatitry ny Pr Volontiana Hanta omaly.
Ady amin’ny Covid 19 Nanome fitaovana ny ministera ny AIEA
Nahazo fitaovana manara-penitra avy amin’ny AIEA na ny (Agence Internationale de l’Energie Atomique) ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka.